KISMAAYO(P-TIMES) – Wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay jidadka oo dhan saaka lasoo dhigay ciidamadii ugu badnaa oo ka shaqeynaya sugida ammaanka ee magaalada, sidaas oo kalena ciidamada ayaa xiray jidad muhiim ah oo kuyaalay magaalada.
Sidaas oo kale hareeraha magaalada ayaa la adkeeyey, waxaana ciidamadii ugu badnaa la dhigay jidadka oo dhan, iyadoo cabsi laga qabo in ay dhacaan waxyaabo kala duwan.
Go`aamadii kasoo baxay guddiga Nabadgalyadda sare ee Jubbaland ayaa hoosta ka xariiqay xalay sida ay muhiimka u tahay in la ilaaliyo hanaanka amniga ee Jubbaland, isla markaasna wax kasta oo dhaqdhaqaaq ah la joojiyey.
Jubbaland ayaa xooga saaraysa qabsoomida doorasho uu ku soo baxo Madaxweynaha hadda xilka haya Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe), waxaana cabsi laga qabaa isku day ka yimaada dawladda Soomaaliya.
Wariyaha Puntlandtimes.com ee magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in ay wax kasta adag yihiin, ciidamada Ammaankuna ku jiraan heegan sare lamana garanayo waxyaabaha ka dhalan kara heeganka laamaha Ammaanku ay ku jiraan.